विचार Archive - Page3of5- चारदिशा
नेपाली कांग्रेसको १३ रौं महाअधिवेशन
हरि पौडेल/नेदर्लैंड हाम्रा बाबु बाजेहरुलाई स्वतन्त्रहुनु पर्छ । आफुले कर्तब्य मात्र गर्ने होइन हक़ र अधिकार पनि खोज्नु पर्छ भन्ने कुनै ज्ञानै थिएन। कांग्रेसले हाम्रो बाउ बाजेलाई स्वतन्त्रताको महत्व बुझाए नत्र राणा र शाहबंशले जति हेपे पनि उचित नै सम्झी बसेका थिए। कांग्रेसले सहेको कष्ट,कांग्रेसले गरेको दुःख, हाम्रो बाबू...
एनआरएन केन्द्रमा बेल्जियमको दावेदारीः आधार र आयामहरु !
—दीपेन्द्र के.सी. गैरआवासीय नेपालीहरुको ध्यान आगामी महिना काठमाडौंमा हुन गैरहेको विश्व सम्मेलनमा केन्द्रीत हुदैछ । नेपाल राज्य भर्खरै प्राकृत विपदको पीडादायी र बैधानिक निर्माणको उत्सवपूर्ण क्षणबाट गुज्रिए पछि सैद्धान्तिक वहसहरुको स्वभाविक थाती र पुनःनिर्माणको चरण स्वभाविक रुपमा प्राथमिकतामा स्थापित भएको छ । सम्भवतः अवको एनआरएन नेतृत्वको कार्यदिशा पनि यही...
कलेजमा छोरा छोरीको बिषय छनौटमा अल्मलिनु भएको त छैन !
एसएलसीको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै कक्षा ११ तथा प्राविधिक तथा व्यवसायिकतर्फका थुप्रै विषयमा भर्ना खुलेको छ। एसएलसी उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरु यती बेला कुन विषय? कुन कलेज पढ्नेलगायतका आधारभूत प्रश्नको उत्तर खोज्दै होलान। अनेकानेक विषय र कलेजहरुका बीचमा राम्रो कलेज र विषय छनोट गर्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हो। हाम्रो समाजले भन्छ, राम्रो...
के हो लिपुलेक र कालापानीको विवाद ? (ऐतिहासिक तथ्य र नक्सासहित)
कालापानीमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता लिन न एमालेले पहल ग¥यो न माओवादीहरुले नै डा. सुरेन्द्र के.सी. एकासमय इतिहासमा कालापानी विवादले नेपाली राजनीति निकै तात्यो । अहिलेका गृहमन्त्री वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा मालेका लागि कालापानीको विषय सबैभन्दा मुख्य राजनीतिक ऐजण्डा बन्यो । तर इतिहासको गर्भमा कालापानी हाम्रो हो भन्ने...
घनावस्तीहरूमा मोबाइल टावरहरु कती हानिकारक ?
काठमाडौं/ मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले शहर र गाउँका घनावस्तीहरूमा मोबाइल टावरहरु ठड्याएका छन् । यस्ता टावरहरुबाट फैलिने विकिरणले मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्नसक्ने अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । तर नेपाल टेलिकमले टावरहरूबाट फैलिने विकिरणले मानव स्वास्थ्यमा कुनै नोक्सान हुँदैन भनेर दावी गर्दै आएको छ । हो, यस्तै भएको छ...
नेपाल र नेपाली जनतालाई माया गर्ने मित्रहरूको कमी छैन
हुकुमबहादुर सिंह २०७२ वैशाख १२ गते दिनको ११ बजेर ५६ मिनट नेपालका लागि एउटा भयाबह कालरात्री बनेर आयो । १९९० सालको भूकम्पलाई एउटा कथाको रूपमा सुन्दै आएका आम नेपालीले एउटा भूकम्पको कहाली लाग्दो वास्तविकतालाई आफ्नै आँखाले देखे र मनले अनुभूति गरे । एउटा भूकम्पको परिणाम जे हुनु थियो त्यो...
५ कराेडमा पाकेटमाराहरूकाे रूवाबासि
भरत दाहाल जाजरकाेट जस्ता विकट पहाडी क्षेत्रहरूमा राेगकाे उपचारका अभावले दिनहुँ नागरीकहरूकाे मृत्यू भैरहेकाे छ। गरीब बस्तिहरूमा राेगका कारणले मृत्यूकाे महामारी छ। काठमाडाैंमा बसेका “माननिय” नामका पिशाचहरूले जेब खर्चका लागि अाफूले ५ कराेड पाउनुपर्ने भन्दै मन्त्रिका घरघरमा रूवाबासि सुरूगरेका छन्। याे ५ कराेडकाे दरले मागिरहेकाे रकम जाजरकाेटमा खर्च गर्नुपर्ने...
कस्को डिजाइनबाट चलिरहेछ नेपालको राजनिती ?
भरत दहाल चीन विरोधि नीतिमा सहकार्य गर्दागर्दै पनि संसदको पुनस्र्थापनापछि पश्चिमी शक्तिहरू र भारतीय विस्तारवादका गतिविधिहरू फरक ढंगले अगाडि बढेका छन् । संविधानसभाको चुनावपछि भारतीय विस्तारवाद र त्यसका एजेन्टहरूले अघि बढाएका गतिविधिहरू देशका लागि सर्वाधिक घातक बन्दै गएका छन् । यसर्थ, भारतीय विस्तारवादका योजनाहरूलाई आम जनताका बीचमा लैजानका लागि...
सम्मानको अर्थ उत्तरदायित्व पनि हो
भोला लामिछाने , भनिन्छ मानिस सामाजिक प्राणी हो , ऊ समाज बाहिर टाढा रहेर बाच्न सक्दैन । उसको जिवनको शुरूदेखी अन्त्यसम्म समाजमा हुने हरेक गतिविधिले प्रतक्ष्य वा परोक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको हामी सबैले अनुभव गर्दै र भोग्दै आएको कुरामा निःसन्देह छैन । अहिले उठान गर्न खोजिएको विषय समाजलाई हामीले...
यसरी नामेट पार्न लागेका छन हाम्रो तिलौराकोटलाई भारतीयहरु
तारानन्द मिश्र भारतीय पुरातत्त्वविद् श्रीमती देवाला मित्राले तिलौराकोट कपिलवस्तु हुन नसक्ने बताउँदै पिपरहवाको उत्खनन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि कपिलवस्तुको विवाद सतहमा आएको थियो। त्यसै बेला हामीले भारतीय पुरातत्त्वविद् एनआर बनर्जीको प्राविधिक सहयोग लिने हेतुले उनलाई नेपाल बोलायौँ। तर, दुर्भाग्य ! उनले पनि राजनीति गर्न थाले। उनी हाम्रो तिलौराकोटविरुद्ध खुलेर...